Rasmi: Sheikh Muqtaar Roobow oo isku dhiibay maamulka K/Galbeed Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Rasmi: Sheikh Muqtaar Roobow oo isku dhiibay maamulka K/Galbeed Soomaaliya
Rasmi: Sheikh Muqtaar Roobow oo isku dhiibay maamulka K/Galbeed Soomaaliya
Xudur (Caasimada Online) – Wadaadka lagu magacaabo Sheekh Muqtaar Cali Roobow (Abuu Mansuur) ayaa isku soo dhiibay Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida uu xaqiijiyay Taliyha Ciidanka Booliska gaarka ah ee maamulkaas Shiine Macalin Nuurow.
Wasiirka Warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed Ugaas Xasan oo la hadlay Caasimadda Online ayaa xaqiijiyey inuu Mansuur ku sugan yahay Magaalada Xudur isla markaasna uu isku soo dhiibay Maamulka.
Sidoo kale Taliyaha ayaa Risaala u sheegay Abuu Mansuur keligiisa uu isku soo dhiibay maamulka Koonfur Galbeed, Maleeshiyaadkii uu watayna ay ku sugan yihiin duleedka Abal.
Dhanka kale Afhayeenka Madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Nuuradiin ayaa sheegay qorshaha Koonfur Galbeed in uu yahay sidii si nabad gelyo ah loogu soo dhaweyn lahaa wadaadka.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu wadaa maanta in uu tago degmada Xudur ee gobolka Bakool, si uu ula kulmo Wadaadka.
Dagaalyahano ka tirsan Shabaab ayaa olole xoogan ugu jiray in ay gacanta ku soo dhigaan Abuu Mansuur oo mudo badan fariisin ku lahaa degaanka Abal, halkaasi oo marar badan labada dhinac ku dhexmaray Dagaal qaraar.
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ayaa xilal badan ka soo qabtay Al-shabaab, waxaana ka mid ah xilalkii uu soo qabtay Hoggaamiye ku xigeenkii Al-Shabaab iyo sidoo kale Afhayeenka Al-Shabaab.
Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa ka mid ahaan jiray dagaalyahanada ugu waa weyn Al-Shabaab, waxaana la sheegay in sanadkii 2013-dii uu ka baxay ka dib markii ay is khilaafeen.
Abuu Mansuur ayaa Dowladda Mareykanka waxa ay madaxiisa dul dhigtay lacag dhan Shan Milyan oo Dollar, sanadkii 2012-kii, xilligaasi oo Shabaab ay iclaamiyeen in ay ku biireen Al-Qaacidda.